China New Energy Applications fitaovana fampitaovana sy mpanamboatra | Yongjie
Fampiharana: akorandriaka bateria herinaratra, mpampitohy, boaty PACK ho an'ny bateria herinaratra, fitoeran-bateria herinaratra, paosin'ny bateria lithium ion, sela bateria
Ny lanjan'ny jiro mandeha ho azy dia ny làlan'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiara manerantany, ary ny fitaovana mavesa-danja amin'ny lanjan'ny lanjan'ny fiara dia ny firaka aliminioma. Ny fampiharana fitaovana aliminioma amin'ny fiara dia misy lanjany lehibe amin'ny famahana ny tsy fahampian'ny angovo any Shina, ny fandotoana ny tontolo iainana ary ny fahaizan'ny fitaterana ambany. Fanadihadiana Ny fampidirana ireo fitaovana firaka aliminioma amin'ny maivana amin'ireo fiaran'ny angovo vaovao dia nampidirina, ary ny fampandrosoana haingana ireo fiara mpitondra angovo vaovao dia hitondra voka-tsena goavana amin'ny fampandrosoana ireo fitaovana firaka aliminioma. Nasongadiny fa ny fampiharana ny firaka aliminioma sy ireo fitaovana maivana hafa ary ny famolavolana firafitra vaovao dia ny fiara angovo vaovao manana tombony ara-teknika lehibe toy ny fiarovana, fitsitsiana angovo, ary ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fepetra maivana lehibe.
Ny firaka aliminioma dia manana fitarihana herinaratra sy fahaiza-miasa tsara, ary fitaovana fanaparitahana hafanana tena tsara, mety amin'ny vokatra herinaratra isan-karazany toy ny herinaratra avo lenta, famatsiana herinaratra azo antoka, famatsiana herinaratra, famatsiana herinaratra, fampitana radio sy fahitalavitra, famatsiana herinaratra inverter, sns. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny sehatry ny vokatra elektronika herinaratra toy ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy.
Ny foil aluminium dia afaka manamaivana ny fampitahana ny batterie, mampihena ny effet thermal, manatsara ny fahombiazan'ny tahan'ny ary mampihena ny fanoherana anatiny ny bateria ary ny fitomboan'ny fanoherana anatiny izay mandroso mandritra ny bisikileta faharoa, ny fampiasana alim-pito alimo amin'ny fonosana bateria dia afaka mampitombo ny fiainana tsingerin'ny bateria ary manatsara ny fifamatorana eo amin'ny akora mavitrika sy ny mpanangona ankehitriny. Ahena ny vidin'ny famokarana sarimihetsika; ny teboka manan-danja dia ny fampiasana bateria lithium fonosana aluminium foil fonosana afaka manatsara be ny tsy fitovizan'ny fonosana bateria ary mampihena be ny vidin'ny famokarana bateria.
Ny ampahany amin'ny aliminioma ho an'ny fiara vaovao dia ny vatana, kodiarana, chassis, andry fanoherana fifandonana, gorodona, bateria elektrika ary seza.
Mba hampitomboana ny kilometatra dia mila maodely fitambarana bateria lithium marobe ireo fiara mandeha herinaratra vaovao. Ny modely tsirairay dia misy boaty bateria maromaro. Amin'izany fomba izany, ny kalitaon'ny boaty bateria tsirairay dia misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny maody bateria iray manontolo. . Noho izany, ny fampiasana firaka aliminioma ho fitaovana hanaovana casings bateria dia nanjary safidy tsy azo ihodivirana ho an'ny famonosana bateria herinaratra.
Previous: Fampitaovana rafitra fampitana hafanana
Manaraka: Fifandraisana sy fitaovana elektronika
Ny fifandraisana sy ny fampiharana elektronika mat ...